February 2013 | IT Sharing Network
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... အားလုံးသိပြီသားဖြစ်တဲ့ CCleaner Professional + Business Edition 3.27.1900 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Business Edition နှင့် Professional ကြိုက်နှစ်သက်ရာသုံးနိုင်ပါတယ်.... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Crack + serial ပါဝင်ပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast မှာတင်ပေးထားပါတယ်....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ကွန်ပျူတာမြန်ဆန်စေဖို့အတွက် System Speedup တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Avira System Speedup v1.2.1.8200 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ System Speedup တို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ... အသေးစိပ်လေ့လာလိုလျှင် http://www.avira.com/en/avira-system-speedup ကို Click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်.... လိုင်စင်အတွက် Regkey.reg လေးပါဝင်ပြီး Double Click နှိပ်လိုက်ယုံနဲ့ လိုင်စင်ထည့်ပြီးသားရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast မှာတင်ပေးထားပါတယ်...
Ready Boost (Menory Stick ကိုအသုံးပြုပြီး System Speed ကိုမြှင့်နည်း)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူတွေအတွက် အလွန်အသုံးဝင်မည့် Menory Stick ကိုအသုံးပြုပြီး System Speed ကိုမြှင့်နည်း၊ အရေးပါလာမည့် Ready Boost အကြောင်း (စာအုပ်) နှင့် အသုံးပြုနည်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူတိုင်း Menory Stick တစ်ချောင်းတော့ရှိကြပါတယ်.... အသုံးပြုနေတဲ့ Menory Stick ကို အသုံးပြုပြီး Windows System Speed ကို မြှင့်နည်းလေးကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးသိရှိရအောင် မိတ်ဆွေကြီး အိုင်တီမုဆိုး ရေးသားချက် ကွန်ပြူတာထဲက RAM ကို ကူညီပေးမယ့် ReadyBoost အကြောင်း ၊ Youth Computer မှရေးသားထားသည့် အရေးပါလာမည့် Ready Boost အကြောင်း စာအုပ် နှင့် အသုံးပြုနည်းကို စုပေါင်းထည့်သွင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...
ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ s2 gt-i9100 4.1.2 ကို S3 တို့လို Note2 တို့လို multiwindow လေးတင်တဲ့နည်းလမ်းလေးပါ။ အပေါ်က notification bar ရော ဘေးက sidebar ဘားမှာရော ပါလာပြီးသားပါ setting ထဲမှာလည်း ပါလာမှာပါ။ အရင်ဆုံးဖုန်းကို root လုပ်ပြီး CWM တင်ထားပြီးသားတော့ ဖြစ်ရမှာပါ။ ခုတင်ပေးထားတဲ့ဖိုင်လေးကိုဒေါင်းပြီး internal sd ထဲထည့်ထားပါ။
Samsung ရဲ့ နောက်ဆုံး Model ဖုန်းလေးပါ အသစ်ကလေးမို့ root လုပ်နည်းလေး ပြန်လည်ဝေမျှပေးဒါပါ။ သူငယ်ချင်းအားလုံးပဲ အောက်က လင့်လေးက လိုအပ်တာလေးဒေါင်းလုပ် လုပ်ယူလိုက်ကြပါ။
Samsung Galaxy Note II MT6589 Quad Core Android 4.1 Ram 2GB ROM 16GB firmwar တင်နည်းလေးပါ
Clone Note2ကို firmware ပြန်တင်မဲ့နည်းလမ်းလေးပါ။ အကြောင်းကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့် firmware ပျက်သွားတာတို့ ပြန်မတတ်တာတို့ ဖြစ်နေတဲ့သူငယ်ချင်းများ အဆင်ပြေအောင်ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။
i-mobile i-style1 ,i-style2, i-style2i တွေကို root မယ်
i-mobile i-style1 ,i-style2, i-style2i တွေကို root မယ်ဆိုရင် driver အရင်သွင်းထားရပါ့မယ်။ ပြီးရင် root ဖိုင်ပေါ့နော် လိုအပ်ဒါတွေ ကို အောက်မှာ သူငယ်ချင်းအားလုံးဒေါင်းလိုက်ကြပါခင်ဗျာ။
Call Map (ဖုန်းခေါ်ဆိုသူရဲ့ နိုင်ငံနှင့် မြေပုံကိုဖော်ပြပေးမယ့်)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ဖုန်းခေါ်ဆိုသူရဲ့ နိုင်ငံနှင့် မြေပုံကိုဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ Call Map လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... ပုံမှာပြထားတာလေးကို ကြည့်ယုံနဲ့ သိမယ်ထင်ပါတယ်... သူရဲ့ Feature တွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် sharebeast မှာ တင်ပေးထားပါတယ်....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ADSL ကြောင်းသိကောင်းစရာ ကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီစာအုပ်ကလေးကို YOUTH Computer ကရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်.... ADSL ဆိုတာဘာလဲ...... ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ Computer ပေါင်းမြောက်များစွာဟာ Network ချိတ်ထားကြပြီး Computer တွေဟာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ နည်းပညာတွေ၊ စီးပွားရေးကိစ္စတွေ အစရှိတာတွေကို အပြန်အလှန်ဖလှယ်နေကြတာနဲ့အမျှ Computer တွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး Network ချတ်ဆက်မှုဟာအင်မတန် မှများပြားလာပြီး Internet ဆိုတဲ့ ဝေါ်ဟာရကြီးဟာလည်းပေါ်ပေါက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Internet ဆိုတဲ့ ဝေါ်ဟာရကြီးသည် Inter-Network ဆိုတဲ့စကားစုကနေဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Internet ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ Internet ချိတ်ဆက်တဲ့ Computer များဟာလည်း မရေတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားလာပါပြီ။ အဲဒီလိုမျိုး Computer တွေဟာ Internet ကိုအသုံးပြုပြီး ချိတ်ဆက်လာတာနဲ့အမျှ Internet ကို ချိတ်ဆက်တဲ့ Internet Connaction ချိတ်ဆက်မှုနည်းပညာထဲမှာ ADSL လို့ခေါ်တဲ့ Internet Connection ချိတ်ဆက်မှုဟာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Internet Download Manager 6.15 Build3Final ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ်.... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင် idman615.exe ကို Run လိုက်ပါ... ထုံးစံအတိုင်း Next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Resume download လုပ်ထားတာတွေလည်း မပျက်ပါဘူး 6.15 Build3လည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... IDM မှာမပါတဲ့ apk ကဲ့သို့သော အခြား Files Types တွေကိုဒေါင်းစေချင်ရင် ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Box, Zippyshare နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
ဖုန်းကို အလွယ်တကူ root ပြုလုပ်နိုင်မဲ့ software လေးတစ်ခုပါ။ root လို့ရမဲ့ အမျိုးအစားနဲ့ version ကတော်တော်လေးများပါတယ် jelly ၄.၁.၂ ထိ root လုပ်လို့ရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ စမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ ဒေါင်းပြီး ဆောင်ထားလို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အမျိုးအစားတွေနဲ့ version တွေကို တော့ တင်မပေးတော့ဘူးနော် တော်တော်လေးကိုများလို့ပါ။ စမ်းသပ်ပြီးသာ root ကြည့်ပါခင်ဗျာ။
Android သမားများအတွက်ပါ System ထဲက app တွေကို SD ထဲရွေ့မရဘူးဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် အသုံးတည့်မဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ ခုနောက်ပိုင်းထွက်ထဲအမြင့်ဖုန်းတွေမှာ move to sd ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုဖျောက်ထား တာကြောင့် ရွေ့လို့မရတဲ့ ပြသနာလေးဖြစ်နေမှာဆိုလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ s3 တွေမှာလည်း အဲဒီစာသားလေးမပါပါဘူးခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် စမ်းကြည့်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တာပါ။
Viber လိုမျိုး Free Message ပို့လို့တဲ့ app လေးပါ။ ထူးခြားချက်ကတော့ voice mailပို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ လိုင်းသိပ်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာလည်း အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြည်လည်ဝေမျှပေးတာပါခင် သူငယချင်းအားလုံး စမ်းသပ် အသုံးပြုကြည့်ကြပါ။
Temple Run 1 ကိုမဲ့နည်းလေးပါ။ ခိုးပြီးဆော့တာ ၀ါသနာပါတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းအားလုံး အသုံးပြုဖူးကြတယ်ဆော့ဝဲလေးပါ။ system ထဲက app တွေကို sd card ပေါ်ရွေ့မယ်၊ uninstall လုပ်မယ် ၊hide မယ် ၊Share လုပ်မယ် app ပေါ်က cache တွေ data တွေရှင်းလို့ရမယ် လေ။ နောက်ဆုံးဗားရှင်းလေး ပြောင်းသုံးလို့ရအောင် သူငယ်ချင်းအားလုံးအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ အခင်မင်ရဆုံးသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ contact တွေကို Widget အဖြစ်ပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ applaciton လေးပါ စမ်းသပ် အသုံးပြုလို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဒီဖုန်း root လုပ်နည်းလေးက မေးထားတဲ့သူလဲများတယ် ဟိုနားမှာတွေ့ဒီနေမှာလည်း လုပ်နည်းလေးတွေ အကူညီတောင်း ထားတာလေး တွေ့လို့ရေးပေးလိုက်တာပါ ကြာတော့ကြာပါပြီ သုံးတဲ့သူလည်းရှားသွားပါပြီ လုပ်နည်းအဆင့်လေးတွေကများလို့ ရေးပေးလိုက်တာပါ။ လိုအပ်မဲ့ဖိုင်လေးတွေအရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ့မယ်နော်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Internet Download Manager 6.15 Build2Final ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ်.... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင် idman615.exe ကို Run လိုက်ပါ... ထုံးစံအတိုင်း Next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Resume download လုပ်ထားတာတွေလည်း မပျက်ပါဘူး 6.15 Build2လည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... IDM မှာမပါတဲ့ apk ကဲ့သို့သော အခြား Files Types တွေကိုဒေါင်းစေချင်ရင် ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Box, Zippyshare နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ပုံလေးကြည့်လိုက်ယုံနဲ့ ဘာအတွက်သုံးတယ်ဆိုတာ သိကြမှာပါ... စာတွေကတော့ ကျောင်းပြန်သွားပါပြီ :P အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast မှာတင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ...
Sony Neo L ကို CWM တင်လို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတာသူငယ်ချင်းများအတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။သိပြီးတဲ့သူများလည်း သိပြီးကြမှာပါ သူတို့မပါဘူးပေါ့ မသိသေးတဲ့သူများအတွက်ပါ။ကျွန်တော်လည်း တင်ကြည့်တော့ တင်လို့ကိုမရနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာလေ အဲဒါနဲ့ ရှာရင်းရှာရင်းနဲ့သွားတွေ့လို့ ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။
ကွန်ပျူတာမှာ Android ဂိမ်းတွေ ဆော့ဝဲလ်တွေ တင်ပြီး သုံးကြည့်လို့ရတယ် စမ်းသပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ သုံးကြည့်လို့ကြိုက်မှ ဖုန်းထဲထည့်မယ်ပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား။ အရင်တုန်းက တင်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့ BlueStacks ဆိုဆော့ဝဲလ်မျိုးပါ BlueStack ကတော့ အင်တာနက် လိုပါတယ် ဒါလေးကတော့ အင်တာနက်မရှိလည်း အဆင်ပြေပါတယ် ။ ဆော့ဝဲလ်ကို install လုပ်ပြီး
Root Tool အသစ်ကလေးတွေ့လို့တင်ပေးလိုက်တာပါ သူငယ်ချင်းများ အသုံးတည့်မလားဆိုပြီးတော့ပေါ့ ဟိုရှာဒီရှာနဲ့တွေ့လို့ပါ အမျိုးအစားတော်တော် များများလေးတော့ လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
Root လို့ရနိုင်မဲ့ စာရင်းဇယားလေးနဲ့Tool လေးကိုတော့ အောက်က ယူလိုက်ပါခင်ဗျာ။
android phone တွေကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်တဲ့အခါ adb driver မသိဘူးဖြစ်တဲ့ပါတယ်။ adb driver ထည့်သွင်းပုံလေး မေးထားတဲ့အကိုအတွက်ရော သူငယ်ချင်းအားလုံးအတွက်ရော ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက တော့ သူငယ်ချင်းအားလုံးအသုံးပြုဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ် အသစ်ကလေးမို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။ network တစ်ခုထဲမှာ သုံးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ဆောင်ထားသင့်ပါတယ် သူများက ကိုယ်သုံးနေတဲ့စက်ရဲ့ Internet လိုင်းကို ဖြတ်ထားလို့မရအောင် လုပ်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ အောက်ကလင့်လေးက ဒေါင်းပြီးဆောင်ထားလိုက်ပါ။
Window Phone & Android Phone တို့ရဲ့အသုံးပြုရတာအားသာချက်အားနည်းချက်လေးတွေပြောပြပေးပါ ဆိုပြီးတော့ ကိုဖိုးခေါင်က Cbox မှာမေးထားတာလေး ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။ကျွန်တော်လည်းသေသေချာချာတော့မပြောပြတတ်ပါဘူး အားသာချက်အားနည်းချက်တော့ ကိုယ်ဆီရှိကြမှာပါ။ လေ့လာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်
မိမိဖုန်း၏ Hardware အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ hardware info apk လေးသွင်းထားရုံနဲ့သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Huawei ဖုန်း ၁၈လုံး Recovery သွင်းလို့ ရမဲ့ All In One Custom Recovery Tool Kit (Update)
ဒါလေးကတော့ Huawei ဖုန်းတွေအတွက် CWM Recovery သွင်းဖို့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်……
ဒီ Tool Kit မှာပါတဲ့ ဖုန်းတွေကတော့
OneKeyRoot (ဖုန်းတော်တော် များများကို root လို့ရပါတယ်)
Onekeyroot လေးက ဖုန်းတော်တော်များများကို root လုပ်လို့ရပါတယ် ။ root လုပ်လို့ရနိုင်မဲ့ ဖုန်းစာရင်းကိုအောက်မှာပေးထားပါတယ်
P1 တော့ P1ပါ T9200 ဖြစ်နေတော့ Root Tool တွေနဲ့ လုပ်လို့မရလို့ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တောင်းထားလို့ ရှာပြီး Root လုပ်နည်းသူငယ်ချင်းအားလုံးအတွက် ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။ အရင်ဆုံးလိုအပ်မဲ့ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းပါ့မယ်...
ဘောလုံးပွဲဝါသနာရှင်များအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဘောလုံးပွဲတွေကိုLive ကြည့်လို့ရတဲ့ apk လေးကိုပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ Android only နော် တစ်ခြမ်းပဲ့ ပန်းသီးတွေအတွက် ပါဘူးနော်...
အရင် zip ဖိုင်လေးကိုဒေါင်းပြီး sd card ထဲက ဘယ်ဖိုဒါအောက်မှာမှ မထားပဲ ဒီအတိုင်းလေးထည့်ပေးထားပါ။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Laptop ပိုင်ရှင်များအတွက် သိထားသင့် လေ့လာသင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ Laptop ကွန်ပျူတာပြုပြင်နည်းနှင့် သိသင့်စရာများ စာအုပ်ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... စာမြည်းဖတ်နိုင်ရန် ရှေ့စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာကို ဖော်ပြပေးထားပြီး လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Minus, Shharebeast နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Virus ဆိုရင် အားလုံးသိကြပါတယ် Worm, Trojamhorse တို့ပါ နားလည်သွားအောင် Virus,Worm,Trojanhorse တို့၏ ကွာခြားချက် စာအုပ်လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... စာမြည်းဖတ်နိုင်ရန် ရှေ့စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာကို ဖော်ပြပေးထားပြီး လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast, Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
How To Install Myanmar Font For Ubuntu (မြန်မာလို)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Ubuntu မှာ မြန်မာဖောင့်ထည့်သွင်းနည်းကို ရေးသားထားတဲ့ How To Install Myanmar Font For Ubuntu (မြန်မာလို) စာအုပ်ကလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast, Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
How To Install Ubuntu 10.04 Bata 1 on Virutal Box (မြန်မာလို)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Uubntu အသုံးပြုလိုတဲ့ ဘော်ဒါများအတွက် Virutal Box ပေါ်မှာ အသုံးပြုနည်း စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ How To Install Ubuntu 10.04 Bata 1 on Virutal Box (မြန်မာလို) စာအုပ်ကလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Ubuntu ကိုမရင်းနှီးသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် စမ်းသပ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်... အင်တာနက်ကော်နရှင် အသင့်တင့်ရှိယုံနဲ့ အသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေပါတယ်... Windows လို အာရုံမနောက်ရပါဘူး အလကားပေးတဲ့ os ဖြစ်လို့ ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ ကြိုက်သလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်... Anti-Virus အတွက်လည်း အာရုံမနောက်ရသလို windows မှာလို Advanced SystemCare တွေဘာတွေမလိုပါဘူး.... စာမြည်းဖတ်နိုင်ရန် ရှေ့စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာကို ဖော်ပြပေးထားပြီး လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Minus, Shharebeast နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်...
TuneUp Utilities 2013 13.0.3020.8 (Updated : Feb.2013
PlayerPro Music Player v2.6 (Updated : Feb 3, 2013)
HD Widgets v3.8.2 For Android (Updated : Feb 2, 2013)